Uluhlu lweSoftware yeSoftware kunye neeQonga zeWebhu eziHamba ngeShishini lakho
NgoMgqibelo, Novemba 25, 2017 NgeCawa, ngo-Novemba 26, 2017 UAdam Omncinci
Ndisamangaliswe ngokubanzi linani leziza ezingabonakaliyo kwisixhobo esiphathwayo- kubandakanya kakhulu, abapapashi abakhulu kakhulu. Uphando lukaGoogle lubonakalisile ukuba iipesenti ezingama-50 zabantu bazakushiya iwebhusayithi ukuba ayisihambelani neselfowuni. Ayilothuba nje lokufumana abafundi abongezelelekileyo, ukwenza indawo yakho ibe yeyakho ukuba isetyenziswe kwiselfowuni kunokuwandisa amava akho omsebenzisi ukusukela kuwe azi ukuba abantu okwangoku bahamba! Ngeentlobo ezininzi zezikrini kunye neenkqubo zokusebenza, ukuphucula iselfowuni ayisiyiqhekeza lekhekhe kwakhona, nangona kunjalo.
Nazi izixhobo zokwenza indawo yakho ukuba ilungele ukuSelfowuni.
Isihlomelo -Umnxibelelanisi wakha ii-iOS zendalo, ii-Android, kunye neeapps zikaWindows kwimizuzwana engaphantsi kwama-60.
AppInstitute -Umakhi weApple wabanini bamashishini abancinci abaxakekileyo.
appery.io -Iqonga kuphela elisekwe kwilifu elinezixhobo zophuhliso ezibonakalayo, kunye neenkonzo zokudibanisa ezingasemva
I-AppsGeyser -I-AppsGeyser yinkonzo SIMAHLA eguqula umxholo wakho ube yi-App kwaye ikwenzele imali.
Appy Pie -Ilifu elisekwe kwi-DIY Mobile App Builder okanye i-App Creation Software evumela abasebenzisi ukuba bangabinazo izakhono zokwenza iinkqubo, ukwenza usetyenziso lweWindows 8 Ifowuni, ii-Android kunye nezicelo ze-iPhone zemobile kunye nee-smartphones; kwaye upapashe kuGoogle Play & iTunes.
Ukuhanjiswa -Isixhobo esilula, esisisiseko esiguqula ngokuzenzekelayo umxholo wakho kwisayithi elungiselelwe iselfowuni kunye nolwenziwo olusisiseko.
Usetyenziso lweBizness - Indlela ekhawulezayo nelula kuyo nayiphi na ishishini yokwenza usetyenziso lwe-iPhone nge- $ 39 kuphela ngenyanga!
Ukwakha umlilo Iplatifomu yaBakhi beSixhobo esinamandla kunye neWhitelabeling.
UCodiqa sisakhi esinamandla sokutsala kunye nolahlo sokwenza ii -apps zeselfowuni kunye newebhusayithi.
Como -Yila usetyenziso lwakho lweselfowuni kulo naliphi na ishishini.
UkuDoubMobile -Kuzo zonke izixhobo endizivivileyo, isenokuba zezona zilula ukuzisebenzisa nokuzisebenzisa! Iwizard yabo esisiseko inokukuvumela ukuba ube nesiza esiphathwayo kwimizuzu embalwa. Bayakuvumela ukuba ususe zonke iintengiso zabo kwaye usebenzise isizinda esisesikweni ngeedola ezimbalwa ezongezelelweyo.
IFiddleFly -Umakhi weWebhusayithi olula wesiko ekulula ukuba basebenze kunye nabaxumi babo ekwakheni iisayithi ezihambayo.
Imobicanvas -Simahla, tsala kwaye ulahle i-CMS ephathekayo ngokudityaniswa kwewijethi kunye nengxelo esisiseko.
Hlanganisa -Abapapashi kunye nabayili bewebhu kwihlabathi liphela basebenzisa iMobify Studio ukwenza iiwebhusayithi ezintle eziphathwayo. I-Mobify ipapashe iisayithi zeselfowuni kwinani leenkqubo zolawulo lomxholo, kubandakanya iWindowsPress, iDrum kunye nezinye. I-Mobify nayo ine-injini ye-ecommerce.
Iselfowuni Roadie -Uye wakha amakhulu ezicelo zesiko zeebhendi, abadumileyo kwezemidlalo kunye namashishini. Inkqubo yabo yolawulo lomxholo idityaniswe kakhulu kwaye inobunkunkqele.
Imobdi -Umakhi wewebhusayithi ekufakwa kuyo. Ngoku unganwenwela kwintengiso yefowuni ngesixhobo sethu esikuvumela ukuba wenze iisayithi ezinomdla ngokulula.
mobiSite -Yakha eyakho iWebhusayithi yeWebhusayithi kwimizuzu ejongeka ngathi ityebile kwiifowuni ezikrelekrele kwaye inomdla nakwifowuni ezisezantsi
Mofuse -Iyinkqubo yolawulo lomxholo oshukumayo onokudibanisa indawo yokugcina ivenkile. Yakha, Qalisa, Linganisa, Hlanganisa kunye nokuKhuthaza iwebhusayithi yakho yeselula.
Imivo Sebenzisa izixhobo zokuphucula simahla kunye nekhowudi yokuphela kwangaphambi kweTritium, nayiphi na iwebhusayithi ekhoyo inokuguqulwa, ngexesha lokwenyani, ibe ngamava amahle eselfowuni. Le ndlela ibizwa ngokuba yi-Responsive Delivery, i-analogue yeshishini kuyilo lwewebhu oluphendulayo.
Abafowni bam abaSelfowuni Ii -apps ezifikelelekayo zeselfowuni kunye neewebhusayithi ezizihambelayo zomntu ngamnye, ezingenzi nzuzo kunye nendawo yamashishini amancinci ngecandelo lethu elikhokelayo lokwakha usetyenziso lwe-DIY.
Izinto zeNetObjects zikaMoses Isicelo esikwi-Intanethi kuyilo lwewebhusayithi olusebenzayo olusebenzisa imikhwa yemizobo ukubonelela ngamava omsebenzisi ngokusebenziseka lula ngokungenakuthelekiswa nanto. UMosaic wenziwe ngobuchule ukuba alula, kodwa abe namandla angapheliyo, ukukunceda wakhe iiwebhusayithi ezineselfowuni ezisebenzayo ngemizuzu nje.
Icandelo lePhepha ngumbutho oqhutywa ziimishini ujolise ekuxhobiseni amashishini amancinci kakhulu (VSB's) ngezixhobo eziziimfonomfono nezentlalo ukuze zikhule kwaye ziphumelele.
Snappii yakha i-iPad yemveli, i-iPhone kunye ne-Android ii -apps zeselfowuni ezikhawulezayo ezikhethekileyo kwimizi-mveliso kwaye ezingafuneki kuphuhliso.
TheAppBuilder -Yila kwakhona ishishini lakho ngeeapps. Yenza amashishini kunye nohlelo lukarhulumente olusonwabisa abasebenzi, amaqabane kunye nabaxhasi.
ViziApps -Yila usetyenziso lwakho lwendalo kwaye ulawule idatha yakho ngaphandle kokufaka iikhowudi, emva koko uyiqhube kwangoko kwisixhobo sakho.
tags: appumakhi weappisixhobo sokukhumbuzausetyenzisoumncedisiipayi yeapileii -apps zebiznessukwakha umliloikhodiqanjengayeusetyenziso lweselulaumakhi wosetyenziso lweselfowuniInjini yosetyenziso lweselfowuniumenzi weappsnohlobo oluhambayoUkulungiswa kwefowuniiisayithi ezihambayomovwebabalandeli bam abahambahambayoNgokoumakhi
UGqirha Thomas Ho
Sep 10, 2011 ngo-2:05 PM
'Kumathambo angenanto' kodwa KULULA UKUSEBENZISA, ndiyayithanda iWinkSite endiyisebenzisela iphepha lam lokuqala kwizixhobo zam eziphathwayo.
Indawo ehambelana nayo http://Delivr.com ilungile ekwenzeni iikhowudi zeQR kunye nohlalutyo lwazo.
Sep 10, 2011 ngo-3:05 PM
UWinksite ubonakale ngathi yeyona ndawo iphathwayo kunesixhobo sokunceda ukuguqula okanye ukudibanisa indawo yakho kusetyenziso lweselula… ingaba ndiyaphazama apho?
Sep 11, 2011 kwi-12: 33 AM
Hayi, iWinkSite yenza indawo ekwenza ukwazi ukuzulazula (sele) umxholo ohambelana neselula (kunye nee-RSS feeds)
Sep 12, 2011 ngo-9:57 PM
Izinto ezipholileyo. Izixhobo ezinkulu Doug.
Eli lixesha lesibini ndibona i-FiddleFly ikhankanywe kwiveki yokugqibela okanye kunjalo. Ndizamile ezimbalwa zezi zixhobo (bendingazi nokuba zininzi) kwaye nje ukwabelana nawe kunye nabafundi bakho, iFiddleFly ROCKS!! Ndiyakwazi ukwakha iisayithi eziyilwe ngokwesiqhelo kwimizuzu. Kulungile, ke ngaphambi kokuba ndiqale ukuvakala ngathi ndisebenzela aba bafana (Kunokuba kube sekuhlwile) ndicebisa abafundi bakho ukuba bazame izisombululo ezininzi ngaphambi kokuba benze isigqibo sokugqibela.
Enkosi kwakhona ngesithuba esikhulu
Sep 12, 2011 ngo-9:58 PM
Sep 13, 2011 kwi-3: 35 AM
kuthini nge http://mobdis.com? iisayithi ze-html5 ezihambayo kunye nomakhi weentengiso.
Sep 7, 2013 kwi-10: 44 AM
Yongeziwe, uxolo ngokulibazisa!
Sep 13, 2011 kwi-8: 30 AM
Ndiye ndasebenzisa ezimbalwa zezi zixhobo kwaye ndikwazile ukuphucula kancinci yam udumo online kwinkqubo. Ngokwenene ayisiyonto ilula kodwa iyenzeka kwaye yiyo yonke into ebalulekileyo.
Sep 2, 2014 ngo-4:35 PM
Ungathatha imoovweb ibe lukhetho olungena kuluhlu lwakho, nceda yongeze ukuba uyenzile.